जनकपुरधाम – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ नम्बर प्रदेशसभा बैठकमा शनिवार दिउँसो गर्ने सम्बोधनलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसदले बहिष्कार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
राजपाले औपचारिक निर्णय नगरेपनि ओलीले विगतमा मधेश विरोधी गतिविधि गरेको र मधेशका मागलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन नगरेको विरोधमा सम्बोधन बहिष्कार गरिने राजपाका महासचिव मनिष सुमनले बताए । प्रदेशसभा सांसद उपेन्द्र महतोले बहिष्कारको नेतृत्व गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेश सांसद उपेन्द्र पार्टीको अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोका भतिजा हुन् । उपेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन शुरू हुने बित्तिकै बहिष्कारको निर्णय सुनाएर प्रदेश सभाबाट बाहिरिने बताएका छन् । तर, प्रदेशसभा सांसद रमेश कुर्मी, बाबुलाल शाहले भने हतारमा बहिष्कारको निर्णय गरिने र अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
राजपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाहले भने आफू प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन् । व्यक्तिगत कामको कारण देखाउँदै उनले बैठकमा नआउने बताए । प्रदेशसभाले सबैलाई बैठकमा सहभागी हुन निर्देश जारी गरेको थियो । प्रमुख सचेतक शाह शुक्रवारको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भने दिनभर सहभागी थिए ।
तर, राजपाबाट सरकारमा सहभागी संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई हेर्ने विषयमा राजपा विभाजित भएको देखिएको छ ।
राजपाका महासचिव मनिष सुमनले प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन संसदीय नियमावली विपरीत भएको समेत दावी गरे । ‘प्रदेशसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था नै छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर गल्ती गरेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको सीमा नतोकेको, सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न र सपथ गराउन भूमिका नखेलेको लगायतका आरोप सुमनले लगाएका छन् । प्रदेश सभामा राजपाका २५ सांसद छन् ।
पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न राप्रपाको माग, को–को समातिए ? (विज्ञप्तिसहित)
सिंचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिंचाइ विभाग ! काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्ष जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार देशमा कुल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर सिंचाइयोग्य जमिनमध्ये १४ लाख ३३ हजार २८७ हेक्टरमा मात्र स...